I-Hideaway Haus Igumbi elingu-1 elingenayo ibhulakufesi-ayikho imali yokuhlanza - I-Airbnb
I-Hideaway Haus Igumbi elingu-1 elingenayo ibhulakufesi-ayikho imali yokuhlanza
Igumbi le-motel eliyimfihlo neliyimfihlo edolobheni laseWinter Park! Leli gumbi elisanda kuvuselelwa liyisitendi sodwa esakhiweni ebesisetshenziswa njengehhotela kuphela. Njengoba kuyimfihlo ngokwedlulele, jabulela leli gumbi elinethezekile elihlanzekile nezinsiza ezivela ehhotela lenkonzo elinganiselwe eliseduze (ibhulakufesi nebhavu elishisayo). Isidlo sasekuseni esishisayo sase-continental sihlanganisa amaprotheni (amaqanda, inyama, njll.) ama-waffles amasha azenzelayo, izinhlobonhlobo zesinkwa/amaroli, okusanhlamvu, izithelo ezintsha kanye nenani lezinye izinto.
Le yunithi iphethwe yinkampani efanayo ephethe futhi ephethe i-Best Western Alpenglo Lodge eduze kwayo. Ukuze kucace, le yunithi ayiyona ingxenye ye-Best Western futhi ayihlangabezani namazinga alolo hlobo. Izivakashi zingase zifinyelele ezinye zezinsiza zalelo hhotela (ibhulakufesi nebhavu elishisayo).
4.81 · 213 okushiwo abanye
Iyunithi itholakala maphakathi nedolobha iWinter Park, kungakapheli imizuzu emi-5 ukuya ezindaweni zokudlela namakilabhu angaphezu kwama-25. Ukuthenga nakho kuseduze. Qaphela ukuthi ayikho imali yokuhlanza iyunithi ebingakhuphula isilinganiso senani sasebusuku.
Iphethwe yi-Best Western Alpenglo next door, kukhona othile otholakala esizeni 24/7/365.